Ururka Alshabaab oo weeray fariisin ciidan oo ciidamada dowlada ku lahaayeen deegaanka Kaxda
Updated About:222 days ago 0
Weerar gaadmo ah ayaa ay ciidamo taabacsan Xarakada Alshabaab ku qaadeen xalay fariisin milatari oo ay ciidamada dowlada ku lahaayeen deegaanka Kaxda oo ka tirsan degmada Dharkeynley ee gobolka Banaadir.
Hubka noocyadiisa kala duwan oo la isu adeegsaday dagaalkan ayaa sababay in cabsi iyo argagax ay ku abuurto dadkii degenaa deeganka Kaxda oo hore ugaga soo barakacay Muqdisho.
Wararka waxa ay sheegayaan in dagaalkan uu qasaare ka soo gaaray labada dhinac eek u dagaalantay halkaas. Sarkaal u hadlay maamulka degmada Dharkeynley ayaa ku tilmaamay isku horimaadkan in uu ahaa weerar ay ku doonayaan ururka Alshabaab in ay dadka isku muujiyaan inay weli jiraan.
Weerarkan ayaan ahayn kii ugu horeeyey ee lagu soo qaado fariisin ay ciidamada dowlada ku leeyihiin degmada Dharkeynley ee gobolka Banaadir hase yeeshee dhowr jeer ayaa hore xilliyada habeenkii ay ciidamada dowlada lakulmeen weeraro lagu soo qaado.
Dhinaca kale degmada Huriwaa ee magaalad Muqdisho ayaa xalay kooxo ku hubeysan bastoolado waxa ay ku dileen haweeney ganacsato ahayd degmadaas.
Lama oga sababta haweeneydan loo diley hase ahaatee waxa uu dilkeedu ka mid yahay dilalka ay la kulmaan dadka rayidka ah ee ku nool magaalada Muqdisho.
DFS oo Muqdisho ku qabaneysa shir lagu dhisayo maamulka Jubaland Dhagayso
Madaxda IGAD oo ku shiray Addis Ababa ayaa walaac ka muujiyey xaaladda Kismaayo
Amnesty International oo sheegtay in qoxootiga Soomaalida ee ku nool Adduunyada ay ku jiraan xaalad xun
Maxaad ka taqaanaa 10-ka shaqo ee aduunka ugu xun sanadkan 2013?
IGAD maxey ka soo saartay Jubooyinka Dhageyso
Madaxda Africa oo toddobaadkan u dabaal dagaya 50-sanno guuradii ka soo wareegtay aas-aaska ururka midowga Africa
Statement of H.E. Hassan Sheikh Mohamud, President of Somalia 22nd Extra-Ordinary Summit of Heads of State and Government of IGAD
Somalia: 10 dead in Somalia after al-Shabaab clash with Ethiopian troops
Barack Obama defends ‘just war’ using drones
Kenya: Gunmen kill five near Daadab camp
Somalia celebrates the 50th Anniversary of the OAU in Mogadishu [Press release]